AMISOM oo waqtiga loo kordhiyey & qorshihii DF oo&hellip; | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii AMISOM oo waqtiga loo kordhiyey & qorshihii DF oo&hellip;
Muqdisho (Dalkaan.com) – Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa meel-mariyey qaraar ku aadan muddo kordhin horleh oo loo sameeyey ciidamada nabad ilaalinta Ururka Midowga Afrika (AMISOM) ee haatan ka howl-gala gudaha dalka Soomaaliya.
Muqdisho (Caasimada Online) – Khilaaf cusub oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble ayaa soo shaac-baxay wax kayar laba bilood un kadib...
Farmaajo ma ogolaan doonaa in labadalo Fahad Yasin, Biixi iyo Odawaa?
Manchester City oo bilowday inay Wax ka Ogaato Saxiixa Mattias Svanberg